Sida Loo Codsado Faa'iidooyinka Shaqo La'aanta ee Colorado - The Wealth Circle
Bogga ugu weyn Sida Loo Codsado Faa'iidooyinka Shaqo La'aanta ee Colorado
Gobol kastaa wuxuu siiya faa'iidooyinka caymiska shaqo la'aanta shaqaalaha laga eryay shaqada iyaga oo aan khalad lahayn. Waxaa jira kala duwanaansho u dhexeeya dawlad-goboleedyada sharciyada u-qalmitaanka, shuruudaha daqliga hore, caddadka waxtarka, iyo faahfaahinta kale. Kuwa soo socda waa habka u-qalmitaanka magdhowga shaqala'aanta Colorado.
Shuruudaha u-qalmitaanka ee Faa'iidooyinka Shaqala'aanta Colorado
Waaxda Shaqada iyo Shaqaalaha ayaa go'aamisa u-qalmitaanka faa'iidooyinka shaqo la'aanta iyadoo loo eegayo xaalad-kiis gudaha Colorado. Si loo ururiyo faa'iidooyinka shaqo la'aanta ee Colorado, codsadayaashu waa inay buuxiyaan saddexda shuruudood ee soo socda:
Dakhliga ugu yar waa in la kasbaday wakhti hore:
Si loo kordhiyo dakhliga, dad badan ayaa raadsada faa'iidooyinka shaqo la'aanta Colorado inta ay ka helaan ilo kale taas oo ka dhigaysa mid aad u adag dadka haysta dhibaatooyinka dhabta ah inay dalbadaan oo ay helaan fursadahan.
Si aad ugu qalanto dheeftan, dakhliga ugu yar waa in lagu soo celiyaa lix bilood ama ka badan. Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad haysato caddayn ku filan oo lagu taageerayo sheegashadaada.
Sharciga Colorado wuxuu qeexayaa shaqo la'aanta inaadan ahayn khaladkaaga:
Faafida waxay ahayd waqti adag qof walba. Shirkado badan ayaa ku khasbanaaday in ay joojiyaan hawlahooda shaqo taasna waxa ay keentay in shirkaduhu dib u ceshadaan shaqaalahooda. Runtii, tani waa xaalad hal mar ah oo aan had iyo jeer ciyaarin, si kastaba ha ahaatee, waxaa lagu tiriyaa inay qayb ka tahay sababaha.
Laakiin tani ma joojinayso in dad badan xilalka looga eryo sababo kala duwan awgood. Si kastaba ha ahaatee, marka shaqada lagaa eryo qalad aad samaysay ama aad ku guul daraysato in aad u hoggaansanto qiyamka asaasiga ah ee shirkaddaada, gabi ahaanba waa khaladkaaga.
Shaqo raadis firfircoon iyo karti shaqo ayaa lama huraan ah:
Helitaanka faa'iidooyinka shaqo la'aanta ee Colorado waa fikrad aad u fiican marka kaliya ay tahay inaad fadhiiso guriga oo aadan shaqo qaban. Si kastaba ha ahaatee, riyo maalmeedkaas waa la burburin doonaa sababtoo ah waa inaad awood u leedahay inaad muujiso kartidaada shaqo si aad u hesho faa'iidooyinkan.
Intaa waxaa dheer, marka aad raadinayso dheefahaan, waa inaad awood u yeelatid inaad muujiso sida ay dhab uga tahay shaqada. Dabeecad wax-qabad iyo rabitaan shaqo ayaa aad u caawin doona sababtoo ah waxay muujinayaan inaadan ahayn qof caajis ah.
Dawlado badan ayaa isku dayaya inay abuuraan hannaan hubinaya in qayb weyn oo ka mid ah faa'iidooyinka shaqo la'aanta la siiyo ka-faa'iideystayaasha saxda ah.
Waxaa jira xaalado badan oo ay dadku isku dayeen in ay khiyaameeyaan nidaamka iyaga oo isticmaalaya waraaqo iyo qalabyo been abuur ah, laakiin shuruudo adag oo la sameeyay, waxaad hubin kartaa inaad u qalanto booskan haddii aad u qalanto markaad codsanayso.
Inta badan gobolada ayaa go'aamiya u-qalmitaankaaga faa'iidooyinka shaqo la'aanta iyadoo lagu salaynayo taarikhdaadii shaqo ee dhawaanta iyo dakhliga soo gala hal sano "muddada saldhiga."
Muddada saldhigga Colorado waxaa loo maleynayaa inay tahay afartii rubuc kalandarka sanadka ka hor inta aan dacwadaada la xareyn, sida gobolada intooda badan.
Miyaad shaqo la'aan tahay adiga oo aan khalad kaa ahayn?
Si aad ugu qalanto manfacyada shaqo la'aanta, waa inaad tahay shaqo la'aan adigoon khaladkaaga lahayn. Si kastaba ha ahaatee, waxaad weli heli kartaa fursad aad ku hesho faa'iidooyinkan haddii aad diyaar u tahay inaad qaadato fursad yar oo aad ku guulaysato.
Helitaanka Faa'iidooyinka Shaqo La'aanta Kadib Shaqo-ka-joojin
Weli waad codsan kartaa haddii aad shaqadaada ku waydo shaqo ka fadhiis, dhimis-xoog (RIF), ama hoos u dhigidda cabbirka.
Helitaanka Faa'iidooyinka Shaqo La'aanta Kadib Markii La Eryo
Khasab ma aha in lagaa mamnuuco in aad qaadato faa'iidooyinka shaqo la'aanta haddii lagu sii daayo xirfad la'aan darteed ama aadan ku habboonayn shaqada. Si aad u noqoto qof aan u qalmin, dhaqankaagu waa inuu kor u kacaa heerka "anshax xumada weyn." Tusaale ahaan, haddii aad dagaal jireed la gashay loo-shaqeeyahaaga, taasi waxay u qalmi kartaa dhaqan-xumo weyn.
Helitaanka Faa'iidooyinka Shaqo La'aanta Kadib Joojinta
Gargaarka shaqo la'aanta lama siin doono haddii aad shaqada ka tagto sabab la'aan. Si aad u buuxiso shuruudaha sababta wanaagsan, waa inaad shaqadaada uga tagtaa mid ka mid ah sababahan soo socda:
Meesha waxa ka dhacay rabshad qoys, markaa waa inaad ka baxdo.
Shaqaaleeyaha ama loo shaqeeyaha ayaa adiga shakhsi ahaan kuu dhibaateeya ama loo-shaqeeyaha ayaa ku guuldareysta inuu joojiyo
Xaaladaha shaqada ee khatarta ah, ama
Qadarka iyo Muddada Dheefaha Shaqo La'aanta ee Colorado
Inta lagu jiro xilliga aasaasiga ah, waxaad heli kartaa inta u dhaxaysa 50% iyo 60% celceliska mushaharkaaga toddobaadlaha haddii aad u qalanto dheefaha shaqo la'aanta. Qadarka faa'iidada toddobaadlaha ah, CDLE waxay khusaysaa laba qaacido oo kala duwan waxayna ku siinaysaa labada ugu sarreeya:
Si loo ogaado qaddarka faa'iidada toddobaadlaha ah, u qaybi mushaharka ugu sarreeya ee labada rubuc ee isku xiga 26, ka dibna ku dhufo lambarka 0.6. Qadarka macaashkaagu wuxuu noqon doonaa $561 todobaadkii, oo ku koobnayn qaddarkaas.
Qaacidada labaad waxay u qaybisaa wadarta cadadka aad kasbatay mudada aasaasiga ah 52, ka dib waxay ku dhufatay tirada 2. Qadarka $618 waa lacagta ugu badan ee faa'iidada toddobaadlaha ah.
Inta badan, faa'iidooyinka ayaa la heli karaa ilaa 26 toddobaad; si kastaba ha ahaatee, wakhtiyada shaqo la'aanta sare, waxaa laga yaabaa in la kordhiyo.
Sida Loo Xareeyo Dacwadda Faa'iidooyinka Shaqo La'aanta ee Colorado
Haddii aad ka raadinayso dheefaha shaqo la'aanta gudaha Colorado, waxaad ku soo gudbin kartaa codsigaaga online, telefoon, fakis, ama boostada. Mareegta Waaxda Shaqada iyo Shaqaalaha, waxaad ka heli kartaa macluumaadka xereynta iyo macluumaadka xiriirka onlayn. Haddii aad rabto inaad sii wadato qaadashada dheefaha, waxaad u baahan tahay inaad codsato lacag bixinta labadii toddobaadba mar. Xarunta xoogga shaqadu waa in sidoo kale la diiwaan geliyo.
Wakiilka CDLE ayaa kuu soo diri doona dukumeentiyada qaar ka dib marka uu helo codsigaaga, oo ay ku jiraan Bayaanka Mushaharka iyo Dheefaha Macquulka ah ee muujinaya qiimaha iyo muddada dacwadaada.
Intee in le'eg ayay qaadataa in laga helo faa'iidooyinka shaqo la'aanta ee Colorado?
Waxay qaadataa afar ilaa lix toddobaad in dacwadda bilowga ah laga baaraandego; haddii aad u qalanto lacag bixinta, waxa labadii toddobaadba mar lagaa siin doonaa sanduuq ay bixiyaan loo-shaqeeyayaasha. Lacagta ugu horreysa waxaa badanaa dib loo dhigaa hal toddobaad oo lacag bixin ah, oo loo yaqaan toddobaadka sugitaanka.
Intee in le'eg ayaad ka helaysaa shaqo la'aanta Colorado?
Qofka shaqo la'aanta ah wuxuu helaa qiyaastii 55 boqolkiiba celceliska mushaharkiisa toddobaadlaha ah muddo 12 bilood ah. Soo ogow inta aad heli karto. Faa'iidooyinka toddobaadlaha ah ayaa lagu qiimeeyaa $700.
Marka loo eego aragtida xulashada xun, caymiska shaqala'aanta ayaa macno dhaqaale sameeya. Waa dhaleeceynta caadiga ah ee caymiska shaqo la'aanta in la yiraahdo waxay keenaysaa khatar akhlaaqeed, taas oo yaraynaysa dadaalka shaqada iyo dadaalka shaqo raadinta.
Faa'iidooyinka.Gov - Caymiska Shaqala'aanta Colorado
CDLE Colorado – Shaqo la'aan | Waaxda Shaqada & Shaqaalaynta
17 Shaqaale ee ugu mushaarka badan gudaha USA | Shirkadaha ugu Fiican
8 Siyaabood Sida Dib -u -noqoshada Shakhsi ah ay ku caawin karto Xirfaddaada Si Degdeg ah
Dib u eegista Caymiska Caafimaadka Cigna: Faa'iidooyinka & Khasaaraha| sharci ama khiyaamo
10ka App ee Miisaaniyada ugu Fiican ee Lamaanaha
10-ka Gobol ee Saraakiisha Booliska ugu Fiican Maraykanka
Sida Loo Helo Tigidhka Ardayga NFL Axada
Haye, dadyoow, waxaa jira hab cusub oo miisaanka lagu dhimayo lacag caddaan ah oo la yiraahdo HealthyWage! Eeg tan! “Waxaan…
17 Siyaabaha Loogu Bixiyo Jimicsiga ama Shaqada Gurigaaga
Sidee ugu wanaagsan ee aad u muujin kartaa farxadda ogaanshaha in aad lacag ku hesho shaqada? Bal qiyaas in…
Ka shaqaynta si aad u leexiso credit-ka xun waxay kugu qaadaysaa culayskeeda. Si kastaba ha ahaatee, waxaad samayn kartaa wax badan ...
21 Hustle Side -Bixinta Badan ee Dadka Caajiska ah
Ma u baahan tahay xoogaa lacag caddaan ah oo dheeri ah laakiin ma haysatid waqti, karti ama waxaad tahay caajis ...
Sida Looga Helo Lacagaha Pokémon Go- Talaabooyinka Shaqeeya